Andron'ny Firenena Mikambana: Fotoana hankalazana sy hanadiovana trano
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Andron'ny Firenena Mikambana: Fotoana hankalazana sy hanadiovana trano
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • WTN
Andron'ny Firenena Mikambana androany, andro manan-danja hahatsiarovana fa afaka miara-miasa izao tontolo izao.
Amin'io andro io, ny Firenena Mikambana dia tokony hamorona rafitra afaka manamboatra ny kolikoly, ny fanodinkodinana ary ny tsy fahombiazany ao anatin'ny rindrin'izy ireo.
Ny World Tourism Network dia manana fampahatsiahivana am-pirahalahiana.
Fetin'ny Firenena Mikambana ny alahady 24 oktobra no nanamarika ny tsingerintaona tamin’ny taona 1945 izay nijoroan’ny Charter'ny Firenena Mikambana niditra an-kery.
Ny Andron'ny Firenena Mikambana, ankalazaina isan-taona, dia manome fahafahana hanatsara ny antsika fandaharam-potoana iraisana ary manamafy indray ny tanjona sy ny foto-kevitry ny Satan'ny Firenena Mikambana izay nitarika antsika nandritra ny 76 taona lasa.
Rehefa manomboka miverina tsikelikely amin'ny areti-mifindra Covid-19 izao tontolo izao, dia aoka isika hanamafy ny antso hanamafisana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ho tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka, hiara-hiorina indray ho amin'ny fandriampahalemana sy fanambinana. , rehefa neken'i Shina, Frantsa, Firaisana Sovietika, Royaume-Uni, Etazonia ary ny ankamaroan'ny mpanao sonia ny sata.
Alain St.Ange, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina dia mirary soa an'i Afrika sy any ankoatra ny Andron'ny Firenena Mikambana 2021.
ONU sy Afrika
Ny Andron’ny Firenena Mikambana ankalazaina amin’ny 24 oktobra izao dia fotoana lehibe ho antsika rehetra hisaintsaina ny antony namoronana ny fikambanana ary koa hamakafaka ny ilana ny fiaraha-miasa ho amin’ny fanatsarana ny fiainantsika manokana, ny fahaveloman’ny firenentsika ary ny tontolo iainana. fiarovana.
Araka ny ankasitrahantsika fa taorian’ny Ady Lehibe II no nahatsapan’izao tontolo izao fa nilaina ny hanalavirana ireo firenena amin’izay karazana ady rehetra izay nijoroan’ny Firenena Mikambana (ONU) tamin’ny 1945 mba hisorohana ny ady hanimba toy izany ho avy. Ny 24 Oktobra dia tsy maintsy mitondra antsika hahatakatra ny lanjan'ny tontolo sambatra, milamina, azo antoka ary tsaratsara kokoa indrindra amin'izao fotoana izao i Afrika sy ny Vondrom-pirenena miady amin'ny fiantraikan'ny fanafihana mahery vaika amin'ny fiainantsika amin'ny areti-mifindra Covid-19.
“Mila ny zanany lahy sy vavy rehetra i Afrika mba hiaraka ho iray amin'izao fotoana izao mihoatra noho ny teo aloha, raha te hivoaka matanjaka kokoa noho ny teo aloha isika aorian'ity areti-mifindra ity. Aoka isika samy hanolo-tena hanarina ny indostrian’ny fizahantany ho an’ny tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenentsika tsirairay avy”, hoy i Alain St.Ange.
Mampiasa ny Andron'ny Firenena Mikambana, ny 24 Oktobra 2021, ny Birao Afrikana momba ny fizahantany, hanamafisana ny fahavononany hiasa ho an'ny fizahantany ho an'ny firenena tsirairay ao amin'ny kaontinanta afrikanina.
Tian'ny Firenena Mikambana hanadio trano ny World Tourism Network
Juergen Steinmetz, filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany nanakoako ny tenin'ny filohan'ny ATB saingy nanampy ahiahy mafy:
"Manantena aho fa ny Firenena Mikambana amin'ity andro manokana ity dia hijery ny hetsika ataon'ny masoivoho manokana manokana, ny World Tourism Organization (UNWTO), ary tsy dia manahy momba ny hetsika foiben'ny foibe, fa manahy kokoa ny tsy fahombiazan'ity masoivoho ity tamin'ny fitarihana ny fizahan-tany tamin'ny alàlan'ny krizy COVID-19.
Mitaky fitarihana mahomby, tsy misy fifanoherana ary marina izany, indrindra amin'ny fotoan-tsarotra.
Ny ONU dia tsy nahavita niresaka na nanaiky ireo olana anatiny lehibe (UNWTO) izay nampahafantarina azy, ary tsy maintsy manadio trano mba hinoany, misy ifandraisany ary mandaitra ho an'ireo olona an-tapitrisany miasa, firenena miankina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Izany dia tokony ho tombontsoan'ny firenena mpikambana rehetra sy ny hafa.
Ny ONU dia tsy maintsy mametraka rafitra fitarainana sy fitaovam-pifandraisana hamahana ny olana toy izany. "
Ahoana no hamantarana mora ny dia maharitra